Oge kacha mma iji chọta - ịchọta oge kacha mma ịme ihe ọ bụla
Oge kacha mma iji
Oge kacha mma iji gaa Ecuador
August 27, 2021 February 23, 2021 by Onye Njem ọzọ
Ịchọrọ ịga ebe mara mma, mara mma nke nwere ihe dị ịtụnanya na ebe nlegharị anya dị ịtụnanya, mgbe ahụ ị kwesịrị ịga leta ndị Ekwensu na njem ezumike gị ọzọ. Ị ga -enwe ihe dị ịtụnanya ịtụnanya oge e. N'isiokwu a, anyị ga -atụle ihe kpatara Ecuador ji bụrụ ebe dị mma maka ndị njem na… GỤKWUO
Categories Ecuador, Travel Hapụ ikwu
Oge kacha mma iji gaa California
August 27, 2021 February 20, 2021 by Onye Njem ọzọ
Ọ bụrụ na ị na -eche na ị ga -eleta ọmarịcha njem njem na -enwe ebe nlegharị anya dị iche iche na stardom showbiz, mgbe ahụ California bụ ebe ịchọrọ ịga. Ọ ga -abụ nnukwu njem, ị ga -enwekwa oge ọrụ n'aka gị na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị. Ị nwere ike ịnọ na -eche, gịnị kpatara California ji bụrụ ụdịrị… GỤKWUO
Categories Travel, United States Hapụ ikwu
Oge kacha mma iji gaa Hong Kong
August 27, 2021 February 18, 2021 by Onye Njem ọzọ
Ọ bụrụ na ị na -achọ ileta obodo mara mma, okomoko, na njem nlegharị anya n'oge ezumike gị ọzọ, mgbe ahụ ịga obodo Hong Kong ga -abụ mkpebi dị ịtụnanya maka ndị enyi na ezinụlọ gị. Ọ nwere ihe eji enyere ndụ aka na ihe omume ị ga -enye nke ga -eme ka ị na -arụ ọrụ na obi ụtọ n'oge ọnụnọ gị niile. Gịnị kpatara… GỤKWUO
Categories China, Travel Hapụ ikwu
Oge kacha mma iji gaa Colombia
August 27, 2021 February 16, 2021 by Onye Njem ọzọ
Ọ bụrụ na ị na -achọ ileta ebe nlegharị anya nwere onyinye pụrụ iche nke nwere nri dị ịtụnanya na ndị dị ịtụnanya na ezumike gị ọzọ, mgbe ahụ Colombia bụ oke nhọrọ maka nleta gị. Site n'ọtụtụ ebe nkiri na saịtị dị iche iche iji hụ na nri dị ụtọ na ebe akụkọ ihe mere eme dị ịtụnanya, obodo a ga -eme ka ị na -arụsi ọrụ ike. Ị nwere ike… GỤKWUO
Categories Colombia, Travel Hapụ ikwu
Oge kacha mma iji gaa Miami
August 27, 2021 February 13, 2021 by Onye Njem ọzọ
Ma ị na-achọ ihu igwe na-ekpo ọkụ na-atọ ụtọ nke ndị njem nleta, osimiri mara mma, ọdịbendị na-adọrọ mmasị, ma ọ bụ ihe ịtụnanya ndụ abalị, ebe kacha mma ị ga-eleta abụghị onye ọzọ karịa Miami. Ị nwere ike ịnọ na -eche, gịnị kpatara Miami ji bụrụ ebe njem nlegharị anya dị ịtụnanya? Ọ dị mma, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị nọ ebe a ịgwa gị. N'ime akụkọ a, anyị ga -aga… GỤKWUO
Oge kacha mma iji gaa Tahiti
August 27, 2021 February 11, 2021 by Onye Njem ọzọ
Mgbe gị na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị na -enwe ezumike dị ụtọ na nke mara mma n'ụsọ osimiri mara mma n'ụsọ oké osimiri oke osimiri na -acha anụnụ anụnụ, Tahiti bụ ebe kacha mma ị ga -aga. Ị nwere ike ịnọ na -eche, gịnị kpatara Tahiti ji bụrụ ebe njem nlegharị anya dị ukwuu? Ọfọn, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe… GỤKWUO
Categories French Polynesia, Travel Hapụ ikwu
2021 Oge kacha mma • Wuru na GeneratePress